10 thoughts on “Umabo (isigaba emshadweni wesintu)”
Ngicela ukubuza. Uma iKist ayihambanga kwenziwa njani
Kumele kuqalwe phansi kugcinwe usiko, kwenziwe ngendlela.
Cela kubuza kuymphoqo yini kuthi uma umuntu wesifazane awushadi umshado wesizulu uma abazali bamkhwenyana bengashadanga (umabo) besaphila bona abasekho emhlabeni ngingjabula mengathola mpendulo ngokushesha
Imizi ngokuhlukana ayenzi imikhuba efanayo lokhu kungaya ngomuzi nangendlela okhokho ababenza ngayo. Kweminye imizi indoda igcina usiko lokushadisa abazali bayo ngaphambi kokuthi ishadwe.
Ngiyabo bengiyenza umusebezi wesikole
KARABO RENEILOE SHAKOANE
siyabonga kakhulu ngokusifundisa, mina nje angusuye umZulu kepha ngiyasithanda isiZulu kakhulu namasiko awo. ngiyafisa nje ukuthi ngelinye ilanga ngishade nomZulu
Siyabonga ngolwazi lwamasiko ethu
Asbonge ukthola ulwazi
Siyabonga kakhulu ngalolulwazi enisipha lona,ikakhulu thina Bantu abasha,iningi lethu lethanda okwasetshonalanga bengakwazi ukwakithi,ngalokho Siyabonga nofisa ukubuyela entweni yakubo uyothola umkhomba ndlela la, Siyabonga.